Vaovao - Manidina
Manidina, (mandidy Diptera), na iray amin'ireo isa marobe bibikely miavaka amin'ny alàlan'ny fampiasana elatra iray fotsiny ho an'ny sidina ary ny fihenan'ny elatra faharoa ho knobs (antsoina hoe halteres) ampiasaina amin'ny fandanjana. Ny fepetra manidina dia matetika ampiasaina amin'ny saika bibikely manidina rehetra. Na izany aza, amin'ny entomolojia, io anarana io dia manondro manokana ireo karazana karazana dipteran 125,000, na «lalitra« tena izy », izay zaraina manerantany, ao anatin'izany ireo tendrombohitra ambanivohitra sy tendrombohitra avo.
Dipterans dia fantatra amin'ny anarana mahazatra toy ny gants, midges, moka ,, ary mpitrandraka ravina, ankoatry ny karazana lalitra, ao anatin'izany ny lalitra soavaly, lalitra an-trano, lalitra mitsoka, ary voankazo, renitantely, mpandroba, ary lalitra vano. Karazam-bibikely maro hafa no antsoina hoe lalitra (oh: dragonflies, caddisflies, and mayflies) ), fa ny firafitry ny elany kosa dia mampiavaka azy ireo amin'ny lalitra marina. Karazan-dipterana maro no manan-danja tokoa amin'ny lafiny toekarena, ary ny sasany, toy ny alikadia mahazatra sy ny moka sasany, dia manan-danja amin'ny fitaterana aretina. JEREO NY dipteran.
Amin'ny fahavaratra, betsaka ny lalitra sy bibikely manidina hafa eo amin'ny toeram-piompiana. Misy bibikely marobe koa any amin'ny toeram-piompiana. Manelingelina ny fambolena ny fambolena bibikely. Ny bibikely manelingelina indrindra indrindra dia ny lalitra. Tsy olana ho an'ny tantsaha ihany ny lalitra, fa manelingelina ny olon-tsotra ihany koa izy ireo. Ny flies dia afaka mamindra karazana aretina 50 sy aretina manan-danja amin'ny fiompiana akoho sy akoho amam-borona, toy ny gripa avian, ny aretina Newcastle, ny tongotra am-bava, ny kisoa tazo, polychlorobacellosis avian, colibacillosis avian, coccidiosis, sns. Rehefa mitranga ny valanaretina, dia afaka manafaingana ny fihanaky ny valanaretina, ary ny lalitra be dia be any amin'ny henan'omby dia mety hiteraka fahasosorana sy fandotoana ireo atody. Ny Fiies koa dia afaka manaparitaka aretina isan-karazany amin'ny olona, ​​mandrahona ny fahasalaman'ny mpiasa.
Ka inona no tokony hataon'ny tantsaha amin'ny lalitra?
1. Fanaraha-maso ara-batana
Ny fisorohana sy fifehezana ny fiompiana sy ny fiompiana akoho amam-borona dia ny fanadiovana ara-potoana ny diky, indrindra ny fijerena ny zoro maty amin'ny fako sy ny loto. Ny fako biby dia tokony ho maina araka izay tratra. Hatramin'ny fako sy ny fiompiana akoho amam-borona, ny biby fiompy marary sy ny kilemaina ary ny akoho amam-borona dia tokony hohajaina ara-potoana, avy amin'ny loharano hanafoanana na hampihenana ny toerana ipetrahan'ny moka sy lalitra.
2. Fanaraha-maso biolojika
Ny fifehezana ny moka sy ny lalitra dia ny fambolena fahavalo voajanahary amin'ny diky. Ny fahavalon'ny moka voajanahary dia misy ny dragona sy ny tantely gecko. Amin'ny toe-javatra voajanahary, dia saika tsy misy fahavalon'ny moka voajanahary sy lalitra ao anaty diky, ary ny diky biby maina dia miteraka fitomboan'ny fahavalon'ny moka voajanahary sy lalitra.Na dia mamono lalitra aza ireo fomba ireo ao anatin'ny fotoana fohy, dia tsy afaka mamono tanteraka ireo lalitra izy ireo. Raha te-hanary lalitra ianao dia mila miantehitra amin'ny fomba siantifika.Ny fandrika farany dia teraka ary nafarana avy any Alemana. Antsasak'adiny aorian'ny famadihana ny herinaratra, nanjavona ireo lalitra rehetra tao amin'ny efitrano, ity no fomba siantifika indrindra hanafoanana ny lalitra, ny tsotra indrindra!Angano mpamono lalitra ity ary angano marketing, ary tokantrano mihoatra ny 100, 000 no mampiasa azy. Ity dia vokatra tena tsara izay misambotra lalitra ho azy! Mety amin'ny toeram-piompiana, trano fisakafoanana, trano fisakafoanana, tsenan-tsakafo, zavamaniry fikarakarana sakafo sy toeram-pambolena sy toerana hafa.Ny lalitra dia manana fofona siramamy, vinaingitra, amoniaka ary hazandrano mahery. Rehefa mitsoka ny paoziny ny lalitra dia horoahina any amin'ny fandrika manidina miaraka amin'ny fihodinan'ny takelaka rotary izy ireo.
Fotoana fandefasana: Mey-19-2021